Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle oo shaqada ka joojiyay Taliyeyaal uu Magacaabay Madaxweyne Waare – Kismaayo24 News Agency
Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle oo shaqada ka joojiyay Taliyeyaal uu Magacaabay Madaxweyne Waare
by Ahmed sudani 26th February 2018 26th February 2018 012
Sababta ugu weyn ee xildhibaanada u cuskadeen shaqo ka joojinta ayaa waxa ay ku sheegeen in Madaxweynuhu shifo sharci daro ah u maray magacaabistan.
Xildhibaanada ayaa ku doodaya in marka hore ay aheyd in la magacaabo Guddiyada Amniga, lana saxo qodobo ka mid ah Dastuurka oo ay sheegeen in Waare uu ku xad gudbay.
Xildhibaan Cali Cismaan Ibraahim oo ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay maamulka inuu ku dhisan yahay Dastuur, loona baahan yahay talaabo walba oo la qaadayo in si nidaam ah lagu meel mariyo.
Akhriso: C/Wali Gaas oo Wareegto ku Magacaabay Axmed Maxamuud Cabdalle (Tigaana)
Qiso Gaaban Oo cajiib Ah Sababi Kartana Inaad La Ilmeyso Naxariista Hooyo, Maxey Sameysay Gabadhii Ninkeeda Casuumay..!!
Dhageyso: Maxaadan Ogeyn oo Murugo ah oo Shabaab ay ka geysteen Deegaanka Galcad ka dib marki ay ….
Madaxweyne Xasan“ Xildhibaan Yusuf Dirir wuxuu ahaa howl-kar wax badan u soo qabtay Qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed